Fepetra sy fepetra - Mora Racing
Fepetra sy fepetra amin'ny alàlan'ny fampahalalana ho an'ny mpanjifa
Prices sy fe-potoana fandoavam-bola
Fandefasana sy fandefasana entana
Fihazonana ny anaram-boninahitra
Andraikitra ho an'ny kilema (garantiana)
Fanavotana voucher fanomezana
Lalàna azo ampiharina
Fanapahana vahaolana amin'ny fifandirana
1.1 Ireo fepetra sy fepetra ankapobeny ("GTC") eto aorian'i Wolfgang Mohr, izay miasa eo ambanin'ny "Mora-Racing" ("mpivarotra" eto), dia mihatra amin'ny fifanarahana rehetra amin'ny fandefasana entana izay ampiasain'ny mpanjifa na mpandraharaha (mpanjifa ") Mpivarotra momba ny entana asehon'ilay mpivarotra ao amin'ny fivarotany an-tserasera. Ny fampidirana ny fetran'ny mpanjifa manokana dia mifanipaka amin'izany, raha tsy mifanaraka.
1.2 Ireo fepetra sy fepetra ireo dia mihatra mifanaraka amin'ny fifanarahana amin'ny fandefasana voucher, raha tsy hoe voafaritra mazava izany.
1.3 Ny mpanjifa ao anatin'ny hevitr'ireto fehezan-teny sy fepetra ireto dia olona voajanahary izay mamarana ny fifanakalozana ara-dalàna ho an'ny tanjona izay matetika tsy ara-barotra na ny asany matihanina mahaleo tena. Ny mpandraharaha amin'ny hevitr'ireto fe-potoana sy fepetra ireto dia olona voajanahary na ara-dalàna na fiaraha-miasa ara-dalàna izay, rehefa mamarana ny fifanakalozana ara-dalàna, dia miasa amin'ny asa aman-draharaha ara-barotra na tsy miankina.
2) Famaranana ny fifanarahana
2.1 Ireo famaritana vokatra voarakitra ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra dia tsy maneho tolotra mamatotra amin'ny mpivarotra, fa kosa manolotra tolotra mamatotra amin'ny mpanjifa.
2.2 Ny mpanjifa dia afaka mandefa ny tolotra amin'ny alàlan'ny endrika filaminana an-tserasera tafiditra ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra. Rehefa avy nametraka ny entana voafantina tao anaty harona virtoaly ary nandalo ny dingan'ny fandaminana elektronika, ny mpanjifa dia mandefa tolotra fifanarahana mamatotra ara-dalàna ny amin'ny entana ao anaty harona amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra izay mamarana ny dingan'ny famandrihana. Azon'ny mpanjifa atao ihany koa ny mandefa ny tolotra amin'ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka, paositra na endrika fifandraisana an-tserasera.
2.3 Ny mpivarotra dia afaka manaiky ny tolotra omen'ny mpanjifa ao anatin'ny dimy andro,
amin'ny alàlan'ny fandefasana ny mpanjifa ny fanamafisana baiko an-tsoratra na ny fanamafisana ny baiko amin'ny endrika lahatsoratra (fax na mailaka), izay ahatongavana ny fandraisana ny baiko fanamafisana ny mpanjifa, na
amin'ny fandefasana ny entana arahana amin'ny mpanjifa, izay ahafahan'ny fidirana ny mpanjifa amin'ny mpanjifa, na
amin'ny alàlan'ny fangatahana ny mpanjifa handoa rehefa avy mametraka ny baikony.
Raha misy safidy maromaro voalaza etsy ambony dia vita ny fifanarahana amin'ny fotoana iray izay iray amin'ireo safidy efa voalaza etsy aloha. Ny vanim-potoana handraisana ny tolotra dia manomboka amin'ny andro aorian'ny fandefasan'ny mpanjifa ny tolotra ary mifarana amin'ny faran'ny andro fahadimy taorian'ny fanekena ny tolotra. Raha tsy eken'ny mpivarotra ny tolotra an'ny mpanjifa ao anatin'ny vanim-potoana voalaza etsy aloha dia heverina ho fandavana ny tolotra izy ireo, ary ny vokatr'ilay mpanjifa dia tsy voafatotry ny fanambarany ny fikasana.
2.4 Raha ny fomba fandoavam-bola "PayPal Express" no voafantina, ny fandoavam-bola dia hatolotry ny mpanome tolotra fandoavam-bola PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (etsy ambany: "PayPal"), iharan'ny PayPal - Fepetra fampiasana, azo jerena ao amin'ny https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/userag setuju-full na - raha tsy manana kaonty PayPal ny mpanjifa - ao anatin'ny fepetra fandoavam-bola raha tsy misy kaonty PayPal, azo jerena ao amin'ny https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Raha misafidy ny "PayPal Express" ho toy ny fomba fandoavam-bola ny mpanjifa mandritra ny dingan'ny famandrihana an-tserasera, dia manome baiko fandoavam-bola amin'ny PayPal koa izy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra izay mamarana ny fizotran'ny famandrihana. Amin'ity tranga ity, ny mpivarotra dia efa nanambara ny fanekena ny tolotra natolotry ny mpanjifa tamin'ny fotoana nanombohan'ny mpanjifa ny fizotry ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra izay mamita ny fizotry ny filaminana.
2.5 Rehefa mandefa tolotra amin'ny alàlan'ny endrika fangatahana amin'ny Internet an'ny mpivarotra, ny tahirin'ny fifanarahana dia hovonjen'ny mpivarotra rehefa vita ny fifanarahana ary alefa any amin'ny mpanjifa amin'ny endrika an-tsoratra (oh: mailaka, fax na taratasy) aorian'ny nandefasana ny baiko nomeny. Tsy misy ny fanomezana fanampiny ny lahatsoratra fifanarahana ataon'ny mpivarotra. Raha nanangana kaonty ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra ny mpanjifa alohan'ny handefasana ny baikony, ny tahirin-kevitra momba ny kaonty dia ho voatahiry ao amin'ny tranonkalan'ny mpivarotra ary afaka miditra maimaimpoana amin'ny alàlan'ny kaonty mpampiasa azy arovan'ny tenimiafinao amin'ny alàlan'ny fanomezana ny angon-drakitra miditra.
2.6 Alohan'ny handefasana kaomandy mamatotra amin'ny alàlan'ny endrika fangatahana an-tserasera an'ny mpivarotra, ny mpanjifa dia afaka mamantatra ny mety ho lesoka fidirana amin'ny famakiana am-pitandremana ny fampahalalana aseho eo amin'ny efijery. Ny fomba teknika mahomby amin'ny fanekena tsara kokoa ny lesoka fampidirana dia mety ho ny fampitomboana ny tranokala, miaraka amin'ny fanampian'ny fananganana ny solontena eo amin'ny efijery. Ny mpanjifa dia afaka manitsy ny fidirany ho ampahany amin'ny dingan'ny fandefasana elektronika amin'ny alàlan'ny fitendry mahazatra sy ny totozy mandra-pisiany ny bokotra izay mamarana ny fizotran'ny famandrihana.
2.7 Ny fiteny alemanina sy anglisy dia misy amin'ny famaranana ny fifanarahana.
2.8 Ny fanodinana kaomandy sy ny fifandraisana dia matetika amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny fikarakarana lamina mandeha ho azy. Ny mpanjifa dia tsy maintsy miantoka fa ny adiresy mailaka nomeny ho an'ny fanodinana ny baiko dia marina ka ny mailaka alefan'ny mpivarotra dia azo raisina amin'ity adiresy ity. Manokana, rehefa mampiasa sivana SPAM, ny mpanjifa dia tsy maintsy miantoka fa ny mailaka rehetra alefan'ny mpivarotra na avy amin'ny antoko fahatelo nanirahana azy tamin'ny fikarakarana baiko dia afaka natolotra.
3) Zo ny fialana
3.1 Ny mpanjifa amin'ny ankapobeny dia manan-jo hisintona.
3.2 Ny fampahalalana misimisy momba ny zon'ny fisintahana dia hita ao amin'ny politikan'ny fanafoanana ny mpivarotra.
4) Vidiny sy fepetra andoavam-bola
4.1 Raha tsy misy fanamarihana hafa momba ny famaritan'ny vokatra ny mpivarotra, ny vidiny omena dia ny vidiny feno izay misy haba amin'ny fivarotana araka ny lalàna. Ny vidin'ny fandefasana sy ny fandefasana fanampiny izay azo atao dia voalaza manokana ao amin'ny famaritana vokatra tsirairay avy.
4.2 Raha misy ny fandefasana any amin'ny firenena ivelan'ny Vondrona eropeana, mety hisy ny vidiny fanampiny izay tsy tompon'andraikitra amin'ny mpivarotra ary tokony ho entin'ny mpanjifa izany. Anisan'izany, ohatra, ny vidin'ny famindrana vola amin'ny alàlan'ny andrim-bola (ohatra ny saram-pandefasana, sarany amin'ny fifanakalozana) na haba hafarana na hetra (ohatra ny haba). Ny vidiny toy izany dia mety hipoitra ihany koa mifandraika amin'ny famindrana vola raha tsy atao any amin'ny firenena ivelan'ny Vondrona eropeana ny fandefasana azy, fa ny mpanjifa kosa dia manao ny fandoavana avy amin'ny firenena ivelan'ny Vondrona Eropeana.
4.3 Ny safidy fandoavam-bola dia hampitaina amin'ny mpanjifa ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra.
4.4 Raha nifanarahana ny fandoavana vola amin'ny alàlan'ny famindrana banky, dia tokony halefa avy hatrany ny fandoavam-bola aorian'ny famaranana ny fifanarahana, raha tsy efa nifanaiky ny daty manaraka ny antoko.
4.5 Rehefa mandoa amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba fandoavam-bola natolotry ny PayPal, ny fandoavam-bola dia alain'ny mpanome tolotra fandoavam-bola PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (etsy ambany: "PayPal"), iharan'ny PayPal - Fepetra fampiasana, azo jerena ao amin'ny https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/userag setuju-full na - raha tsy manana kaonty PayPal ny mpanjifa - ao anatin'ny fepetra fandoavam-bola raha tsy misy kaonty PayPal, azo jerena ao amin'ny https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Raha voafantina ny fomba fandoavam-bola "PayPal Credit" (fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny PayPal), dia atolotry ny mpivarotra amin'ny PayPal. Alohan'ny hanaiky ny fanambaràn'ny mpivarotra ny andraikiny, PayPal dia nanao fanamarinana fampindram-bola tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra omen'ny mpanjifa. Manana ny zony handà ny mpanjifa ny fomba fandoavam-bola "PayPal Credit" ny mpivarotra raha misy valim-panadinana ratsy. Raha avelan'ny PayPal ny fomba fandoavam-bola "PayPal Credit", ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny vola faktiora amin'ny PayPal araka ny fepetra voafaritry ny mpivarotra, izay ampitaina aminy ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra. Amin'ity tranga ity dia tsy afaka mandoa afa-tsy PayPal amin'ny fihenan'ny trosa izy. Na izany aza, na dia eo aza ny fanendrena ny fitakiana dia mbola tompon'andraikitra amin'ny fangatahana mpanjifa ankapobeny ny mpivarotra e. B. amin'ny entana, fotoana fandefasana, fandefasana, fiverenana, fitarainana, fanambaràna fanafoanana ary fiverenana na naoty.
4.7 Raha misafidy ny iray amin'ireo fomba fandoavam-bola natolotry ny serivisy fandoavam-bola "Shopify Payments" ianao, ny fandoavam-bola dia alain'ny mpamatsy tolotra Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandy (etsy ambony "Stripe"). Ny fomba fandoavam-bola tsirairay natolotra tamin'ny alàlan'ny Shopify Payments dia ampitaina amin'ny mpanjifa ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra. Mba hikarakarana ny fandoavam-bola, ny Stripe dia afaka mampiasa serivisy fandoavam-bola hafa, izay azo ampiharina ny fepetra fandoavam-bola manokana, izay ampahafantaroan'ny mpanjifa azy manokana. Ny fampahalalana misimisy momba ny "Shopify Payments" dia hita ao amin'ny Internet ao amin'ny https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.8 Raha voafantina ny fomba fandoavam-bola "faktiora PayPal" dia atolotry ny mpivarotra amin'ny PayPal. Alohan'ny hanaiky ny fanambaràn'ny mpivarotra ny andraikiny, PayPal dia nanao fanamarinana fampindram-bola tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra omena ny mpanjifa. Manana ny zon'ny mpivarotra handà ny mpanjifa ny fomba fandoavam-bola "PayPal invoice" raha misy ny valin'ny fitsapana ratsy. Raha avelan'ny PayPal ny fomba fandoavam-bola "faktiora PayPal" dia tsy maintsy mandoa ny vola faktiora amin'ny PayPal ny mpanjifa ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoana ny entana, raha tsy hoe nanondro fe-potoana hafa handoavana ny PayPal. Amin'ity tranga ity dia tsy afaka mandoa afa-tsy PayPal amin'ny fihenan'ny trosa izy. Na izany aza, na dia eo aza ny fanendrena ny fitakiana dia mbola tompon'andraikitra amin'ny fangatahana mpanjifa ankapobeny ny mpivarotra e. B. amin'ny entana, fotoana fandefasana, fandefasana, fiverenana, fitarainana, fanambaràna fanafoanana ary fiverenana na trosa. Ho fanampin'izany, ny fepetra ankapobeny ampiasaina amin'ny fampiasana fividianana kaonty avy amin'ny PayPal dia mihatra, izay azo jerena ao amin'ny https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
4.9 Raha voafantina ny fomba fandoavam-bola "PayPal direct debit" dia hanangona ny vola faktiora avy amin'ny kaontin'ny mpanjifa ny PayPal aorian'ny namoahana ny mandat deba mivantana SEPA, fa tsy alohan'ny faran'ny vanim-potoana ho an'ny fampahalalana mialoha amin'ny anaran'ny mpivarotra. Ny fampandrenesana mialoha dia ny fifandraisana (oh: faktiora, politika, fifanarahana) ho an'ny mpanjifa izay milaza fa misy debit amin'ny alàlan'ny fividianana mivantana SEPA. Raha toa ka tsy voavotra ny trosa mivantana noho ny tsy fahampian'ny vola ao amin'ny kaonty na noho ny antsipirian'ny banky diso omena, na raha manohitra ny fandoavana mivantana ny mpanjifa, na dia tsy manan-jo hanao izany aza izy, ny mpanjifa dia tokony hitondra ny sarany alain'ny banky tsirairay avy raha tompon'andraikitra amin'izany izy .
5) Fandefasana sy fandefasana entana
5.1 Ny fandefasana entana dia atao amin'ny làlan'ny fandefasana mankany amin'ny adiresy natolotry ny mpanjifa, raha tsy efa nifanarahana. Rehefa manamboatra ny fifanakalozana, ny adiresy fandefasana omena amin'ny fikirakirana ny baikon'ny mpivarotra dia tapa-kevitra.
5.2 Ny entam-barotra atolotry ny mpandraharaha mpandefa dia atolotra "curbside maimaim-poana", izany hoe hatrany amin'ny sisin-dàlana ho an'ny besinimaro akaiky indrindra ny adiresy fandefasana, raha tsy hoe voalaza ao amin'ny fampahalalana momba ny fandefasana any amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra ary raha tsy nifanarahana.
5.3 Raha tsy mahomby ny fandefasana ny entana noho ny antony nahatonga ny mpanjifa tompon'andraikitra, ny mpanjifa dia hitondra ny vidiny mirary azon'ny mpivarotra. Tsy mihatra amin'ny vidin'ny fandefasana izany raha toa ka mampihatra ny zony hisintona ny mpanjifa. Ho an'ny vidiny miverina, raha mampihatra ny zony hisintona ny mpanjifa dia mihatra ny fepetra voalaza ao amin'ny politikan'ny fanafoanana ny mpivarotra.
5.4 Mikasika ny fanangonana tena, ny mpivarotra dia mampandre ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka voalohany fa ny entana efa nanafarany dia efa vonona hanangona. Rehefa avy nahazo ity mailaka ity ny mpanjifa dia afaka manangona ny entana ao amin'ny foiben'ny mpivarotra aorian'ny fifampidinihana amin'ny mpivarotra. Amin'ity tranga ity, tsy misy sarany fandefasana entana.
5.5 Omena ny mpanjifa toy izao ny voucher:
6) Fihazonana lohateny
Raha manao ny fandoavam-bola ny mpivarotra dia tahiriny ny fananana ireo entana nampitaina mandra-pahatongany ny vidin'ny fividianana.
7) Andraikitra ho an'ny kilema (garantiana)
7.1 Raha simba ny entana novidiana dia mihatra ny fepetra arahin'andraikitra noho ny kilema.
7.2 Ny mpanjifa dia angatahina hitaraina amin'ny mpanatitra momba ny entana efa voateraka izay misy fahasimbana eo amin'ny fitaterana ary hampahafantatra izany ny mpivarotra. Raha tsy manara-dalàna ny mpanjifa dia tsy misy fiatraikany amin'ny fanambarana ara-dalàna na fifanarahana nataony momba ny kilema.
8) Fanavotana ireo vouche fanomezana
8.1 Ny voucher izay azo vidiana amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra (etsy ambany dia "voucher fanomezana") dia azo vidim-panavotana ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra ihany, raha tsy voalaza ao amin'ny voucher izany.
8.2 Ny tapakila fanomezana sy ny sisan-karama sisa dia azo avotana amin'ny faran'ny taona fahatelo aorian'ny taona nividianana ilay taratasy. Ny trosa sisa dia homena ny mpanjifa mandra-pahatapitry ny vanim-potoana.
8.3 Ny voucher fanomezana dia azo avotana vao vita ny fizotran'ny filaminana. Ny faktiora manaraka dia tsy azo atao.
8.4 Voucher fanomezana iray monja no azo avotana isaky ny kaomandy.
8.5 Ny voucher fanomezana dia azo ampiasaina hividianana entana fotsiny fa tsy hividianana voucher fanomezana fanampiny.
8.6 Raha tsy ampy ny sandan'ny tapakila fanomezana handrakofana ny baiko, ny iray amin'ireo fomba fandoavam-bola hafa natolotry ny mpivarotra dia azo voafantina handamina ny tsy fitovizany.
8.7 Ny fifandanjan'ny tapakila fanomezana dia sady tsy andoavam-bola no tsy aloa ny zana-bola.
8.8 Azo afindra ilay tapakila fanomezana. Ny mpivarotra dia afaka, amin'ny alàlan'ny fanatanterahana azy, mandoa ny tompony tsirairay avy izay manavotra ny tapakila fanomezana ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpivarotra. Tsy mihatra izany raha toa ka tsy mahalala ny mpivarotra na tsy mahalala alalana ny tsy fahazoan-dàlana, ny tsy fahafahan'ny lalàna na ny tsy fahazoan-dàlana an'ny tompona tsirairay avy.
9) Lalàna azo ampiharina
Ny lalànan'ny Repoblika Federaly Alemana dia mihatra amin'ny fifandraisana rehetra eo amin'ny samy antoko, tsy anisany ny lalàna momba ny fividianana entana azo esorina iraisam-pirenena. Ho an'ny mpanjifa, ity lalàna voafidy ity dia tsy mihatra afa-tsy amin'ny alàlan'ny fiarovana nomena nomena tsy esorina amin'ny fepetra takian'ny lalàna ao amin'ny fanjakana izay onenan'ny mpanjifa.
10) Vahaolana mety hifandirana
10.1 Ny Vaomiera EU dia manome sehatra iray hamahana ny olana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ity sehatra ity dia toeram-pifandraisana ho an'ny fametrahana olana eo amin'ny fitsarana amin'ny alàlan'ny fifanarahana mivoaka avy amin'ny fivarotana an-tserasera na fifanarahana serivisy ifandraisan'ny mpanjifa.
10.2 Ny mpivarotra dia tsy terena na vonona handray anjara amin'ny fomba fandaminana ny fifanolanana alohan'ny biraon'ny arbitration an'ny mpanjifa.